ကွဲကွဲပြားပြား မသိသူများအတွက် တောကြက်ဥ၊ အိမ်ကြက်ဥ နဲ့ စီပီ ကြက်ဥတို့ အကြောင်း - Barnyar Barnyar
တောကြက်ဥ မမြင်ဖူးသူတွေအတွက် တောကြက်ဥ အိမ်ကြက်ဥ CP ကြက်ဥ ယှဉ်ပြထားတာပါ…. ရောင်းရန် မဟုတ်ပါ….. နောက်အလျှင်းသင့်လျှင် ရေကြက်ဥ၊ ရေဘဲဥ၊ ဒင်ကျီးဥနှင့် ဟင်္သာဥများ ရှာဖွေတင်ပြပေးပါမည်။
တောကြက်ဥ……. တောစပ်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အပင်ခပ်လတ်လတ် ကိုင်းခြုံ ဆူးခြုံများရှိ အသိုက်များတွင် တွေ့ရသည်။ တစ်လုံးမှစ၍ အများဆုံး ၅လုံးခန့်အထိသာ တွေ့ရတတ်သည်။ ရှားပါး၍ ဆေးဖက်ဝင်သည်ဟု ဆိုကြ၍ တရုတ်သမားတော်များ အဝယ်များသည်။ ယခင်က ပေါများသော်လည်း လက်ရှိ၌ ရှားပါးနေပြီဖြစ်သည်။
တစ်လုံးလျှင် ၂၅၀၀ ကျပ်ခန့်အထိ ပေါက်ဈေး ရှိသည်။ တောကြက်ဥကို ဆန်အရက်ဖြင့် ဖျော်သောက်ပါက အမျိုးသမီးများ မီးယပ်သွေးဆုံးကိုင်ခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းများ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။ တရုတ်ရိုးရာ အားတိုးဆေးများတွင် ထည့်သွင်း ဖော်စပ်ကြသည်။
အိမ်ကြက်ဥ……… သဘာဝအတိုင်း လွှတ်ကျောင်း မွေးမြူထားသည့် ကြက်မများမှ ဥသော အကောင့်ပေါက်မည့်ဥ ဖြစ်သည်။ မဒမ်းများမှ ဥသော လေဥသည် တန်ဖိုးမရှိ ဆေးဖက်မဝင်ပါ။ အိမ်ကြက်ဥသည် ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမရှိအောင် မြန်မာတို့နှင့် ရင်းနှီးပြီးသားပင် ဖြစ်သည်။
အိမ်ကြက်ဥတွင် စစ်တကောင်းကြက်ဥ၊ ညောင်ကန်ကြက်၊ တိုက်ကြက်ဥ နှင့် တိန်ညင်ကြက်ဥ ဟူ၍ အမျိုးအစား ကွဲပြားသည်။ တစ်လုံးလျှင် ၅၀၀ ကျပ်ခန့်အထိ ပေါက်ဈေးရှိသည်။ အရက်နာကျသူတွေအတွက် အိမ်ကြက်ဥ နှင့်သံပုရာသီးဖျော်သောက်ခြင်း၊ အမျိုးသားများအတွက် အိမ်ကြက်ဥ၊ ဖီးကြမ်းနှင့် ပျားရည်ခေါက်စားခြင်း စသည် တို့ဖြင့် လက်ရှိ၌ အသုံးပြုကြသည်။
တောကွကျဥ မမွငျဖူးသူတှအေတှကျ တောကွကျဥ အိမျကွကျဥ CP ကွကျဥ ယှဉျပွထားတာပါ…. ရောငျးရနျ မဟုတျပါ….. နောကျအလြှငျးသငျ့လြှငျ ရကွေကျဥ၊ ရဘေဲဥ၊ ဒငျကြီးဥနှငျ့ ဟင်ျသာဥမြား ရှာဖှတေငျပွပေးပါမညျ။
တောကွကျဥ……. တောစပျတှငျ တှရေ့လရှေိ့သညျ။ အပငျခပျလတျလတျ ကိုငျးခွုံ ဆူးခွုံမြားရှိ အသိုကျမြားတှငျ တှရေ့သညျ။ တဈလုံးမှစ၍ အမြားဆုံး ၅လုံးခနျ့အထိသာ တှရေ့တတျသညျ။ ရှားပါး၍ ဆေးဖကျဝငျသညျဟု ဆိုကွ၍ တရုတျသမားတျောမြား အဝယျမြားသညျ။ ယခငျက ပေါမြားသျောလညျး လကျရှိ၌ ရှားပါးနပွေီဖွဈသညျ။
တဈလုံးလြှငျ ၂၅၀၀ ကပျြခနျ့အထိ ပေါကျဈေး ရှိသညျ။ တောကွကျဥကို ဆနျအရကျဖွငျ့ ဖြျောသောကျပါက အမြိုးသမီးမြား မီးယပျသှေးဆုံးကိုငျခွငျး ကိုယျဝနျဆိပျတကျခွငျးမြား သကျသာ ပြောကျကငျးစသေညျ။ တရုတျရိုးရာ အားတိုးဆေးမြားတှငျ ထညျ့သှငျး ဖျောစပျကွသညျ။
အိမျကွကျဥ……… သဘာဝအတိုငျး လှတျကြောငျး မှေးမွူထားသညျ့ ကွကျမမြားမှ ဥသော အကောငျ့ပေါကျမညျ့ဥ ဖွဈသညျ။ မဒမျးမြားမှ ဥသော လဥေသညျ တနျဖိုးမရှိ ဆေးဖကျမဝငျပါ။ အိမျကွကျဥသညျ ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာမရှိအောငျ မွနျမာတို့နှငျ့ ရငျးနှီးပွီးသားပငျ ဖွဈသညျ။
အိမျကွကျဥတှငျ စဈတကောငျးကွကျဥ၊ ညောငျကနျကွကျ၊ တိုကျကွကျဥ နှငျ့ တိနျညငျကွကျဥ ဟူ၍ အမြိုးအစား ကှဲပွားသညျ။ တဈလုံးလြှငျ ၅၀၀ ကပျြခနျ့အထိ ပေါကျဈေးရှိသညျ။ အရကျနာကသြူတှအေတှကျ အိမျကွကျဥ နှငျ့သံပုရာသီးဖြျောသောကျခွငျး၊ အမြိုးသားမြားအတှကျ အိမျကွကျဥ၊ ဖီးကွမျးနှငျ့ ပြားရညျခေါကျစားခွငျး စသညျ တို့ဖွငျ့ လကျရှိ၌ အသုံးပွုကွသညျ။
မှေးမွူရေးကွကျဥ အကွောငျးကတော့ မပွောတော့ပါဘူး။